ဒူဒူကြီး: Plate Type Heat Exchanger (PHE) Cooling System
သဘေ်ာတွေမှာ Cooler ဆိုတဲ့ Heat Exchanger တွေကို၊ ၁။ shell & tube type heat exchanger (STHE), ၂။ open-flow type heat exchanger, ၃။ contact heat type exchanger နဲ့ ၄။ plate type heat exchanger (PHE) ရယ်လို့ ခွဲခြားအသုံးပြုကြပါတယ်။
shell and tube type heat exchanger တွေကို၊ U tube heat exchanger နဲ့ straight tube heat exchanger တွေ ရယ်လို့ထပ်မံခွဲခြားနိုင်ပြီး၊ တခါ straight tube heat exchanger တွေကို၊ one pass နဲ့ two pass ဆိုပြီးထပ်မံ ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Fig. U tube heat exchanger
Fig. one pass straight tube heat exchanger
Fig. two pass straight tube heat exchanger
straight tube heat exchanger တွေကို steam condensate system, fresh water cooling system, LO cooling system, refrigerant cooling system နဲ့ hydraulic fluid cooling system တွေအတွက်၊ သုံးကြပါတယ်။ U tube heat exchanger တွေကို engine အသေးလေးတွေ၊ gear box အသေးလေးတွေရဲ့ LO cooling system အပါ အဝင်၊ capacity နည်းတဲ့ deck machinery တွေရဲ့ hydraulic fluid cooling system အတွက်၊ အသုံးပြုလေ့ရှိ ပါတယ်။
open-flow type heat exchanger တွေကို charging air cooler အဖြစ်အသုံးပြုသလို၊ contact heat type exchanger တွေကိုတော့ air conditioning & refrigeration plant, windlass တွေ၊ mooring winches တွေနဲ့ crane တွေရဲ့ cooler တွေအဖြစ်အသုံးပြုကြပါတယ်။
plate type heat exchanger (PHE) တွေကို၊ plate and frame heat exchanger သို့မဟုတ် flat plate heat exchanger တွေလို့လည်း ခေါါကြပါတယ်။ plate အချပ်တွေကို၊ တခုစီခွာကာ ဆေးကြောသန့်ရှင်း လို့ရသလို၊ plate ရဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ titanium သတ္တုပြားတွေနဲ့၊ ပြုလုပ်ထားတာမို့ sea water, fresh water တို့နဲ့ ထိတွေ့နေပေမယ့် corrosion မဖြစ်ပါဘူး။
Fig. plate type heat exchanger
shell & tube type heat exchanger တွေနဲ့ plate type heat exchanger တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်၊ U overall heat transfer coefficient တန်ဘိုးပမာဏကို အများဆုံးရရှိနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ U ဆိုတဲ့ overall heat transfer coefficient ဟာ၊ h ဆိုတဲ့ heat transfer coefficient နဲ့မတူပါဘူး။
h ကိုတိုင်းတာတဲ့ယူနစ်ဟာ W/(m2K) ဖြစ်ပါတယ်။
ΔQ = Heat input or heat lost (W),
A = Heat transfer surface area m2 နဲ့
ΔT = Difference in temperature between the solid surface and surrounding fluid area (K or Deg. C) ရယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
h ကို အရည် fluid နဲ့ အစိုင်အခဲ solid တွေရဲ့ အပူကူးပြောင်းမှု heat transfer ကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။
U ဆိုတဲ့ overall heat transfer coefficient ကိုတော့ အရည်အဖြစ်စီးဆင်းနေရင်း အရည်တခုမှ၊ အခြား အရည် တခုသို့ အပူကူးပြောင်းမှု heat transfer ကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာ တနည်းအားဖြင့် plate type heat exchanger တွေနဲ့ shell & tube type heat exchanger တွေမှာသာ အသုံးပြုပါတယ်။
Q = UAΔTLM ဆိုပြီး U ရဲ့တန်ဘိုးကိုတွက်ယူရာမှာ W/(m2K) ဆိုတဲ့ unit နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။
Q = Heat transfer rate (W),
A = Heat transfer surface area (m2),
ΔTLM = log mean temperature difference (K or Deg. C) ဖြစ်ပါတယ်။
ΔTLM တန်ဘိုးဟာ၊ primary fluid ပေါါမူတည်ပြီး၊ ကွာခြားလေ့ရှိပါတယ်။ plate type heat exchanger တွေ နဲ့ shell & tube type heat exchanger တွေရဲ့ overall heat transfer coefficient ဟာ (၃) ဆမှ (၄) ဆလောက် အထိ ကွာတတ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် design အရ compact ဖြစ်ခြင်း၊ maintenance နဲ့ cleaning လုပ်တဲ့အခါပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနဲ့ temperature Control လုပ်တဲ့အခါ ပိုမိုလွယ်ကူခြင်း၊ စတဲ့အချက်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ PHE ဆိုတဲ့ plate type heat exchanger တွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကတော့
၁။ plate တခုနဲ့ တခုကြားမှာ rubber gasket တွေသုံးကာ ဆက်ထားတာမို့ potential for leakage ဆိုတဲ့ အလွယ်တကူယိုစိမ့်နိုင်ခြင်း၊ ၂။ overall heat transfer coefficient ကိုအများဆုံးရရှိနိုင်ပေမယ့်၊ ဖြတ်သန်း စီးဆင်းတဲ့ အရည်စီးဆင်းမှု fluid flow မှာ higher pressure drop ဖြစ်တာမို့၊ pumping rate ကြီးမားတဲ့ pump တွေကို တတ်ဆင်အသုံးပြုရခြင်း၊ ၃။ heat transfer လုပ်ရာမှာ အပူချိန်ကွဲလဲမှုပမာဏ အများကြီး large temperature difference ကိုမရရှိနိုင်ခြင်း နဲ့ ၄။ gasket တွေအသုံးပြုထားရတဲ့အတွက် high temperature fluids အပူချိန်မြင့်တဲ့၊ အရည်တွေကိုအအေးခံဖို့ မဖြစ်နိုင်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေကို တွေ့ ရပါတယ်။
Plate Type Heat Exchanger (PHE) တွေအသုံးပြုထားတဲ့ Cooling System ကို၊ ၁။ Direct Sea Water Cooling System၂။ Central Cooling System နဲ့ ၃။ Central Cooling with Separate Cylinder/ Piston Cooling System ရယ်လို့အခြေခံအားဖြင့် (၃) မျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
Sea Water 1. Main Engine 7. Lubricating Oil Cooler, Main Engine 13. Charging Air Cooler, Auxiliary Engine
2. Auxiliary Engine 8. Lubricating Oil Cooler, Auxiliary Engine 14. Fresh-water Pump
Low Temp. 3. Sea-water Filter 9. Gear Oil Cooler 15. Destination Unit
4. Sea-water Pump 10. Compressor 16. Heat Exchanger For Central Heating
High Temp 5. Fresh-water Cooler (Central Cooler) 11. Condenser 17. Heat Exchanger For Utility Water
6. Fresh-water Cooler (Cylinder Cooler) 12. Charging Air Cooler, Main Engine 18. Expansion Tank
Fig. direct sea water cooling system
cooler တိုင်းဟာသီးသန့်စီရှိနေကြပြီး၊ sea water ကိုအသုံးပြုကာအအေးခံပါတယ်။ main sea water pump ကတဆင့်၊ sea water filter ကိုဖြတ်သန်းလာတဲ့၊ sea water ဟာ၊ main engine နဲ့ generator engine တွေရဲ့ charging air cooler ဆီကိုအရင်ဆုံးသွားပါတယ်။ air coolers တွေဟာ အအေးဆုံး sea water ကိုရရှိပြီး၊ sea water ဟာ LO coolers တွေထံသို့ ထပ်မံစီးဆင်းပါတယ်။
နောက်ဆုံးမှ fresh water cooler သို့မဟုတ် jacket cooling water cooler ထံသို့စီးဆင်းပါတယ်။2stroke low speed main engine တွေမှာ၊ oil cooled piston တွေလဲပါဝင်လာတာမို့၊ LO ရဲ့ temperature ဟာအနည်းငယ် များနေလေ့ရှိပါတယ်။ charging air cooler နဲ့ LO cooler တွေမှာ sea water piping ကို parallel တတ်ဆင်ထား သလို၊ တခါတရံမှာတော့ cooling capacity များများ ထုတ်ပေးနိုင်မယ့်၊ cooling surface area ကြီးတဲ့၊ LO cooler အကြီးစားတွေ တတ်ဆင်အသုံးပြု ပါတယ်။
shell & tube type coolers (heat exchangers) တွေကို၊ direct sea water cooling system မှာသုံးတဲ့ အခါ၊ ဈေးနှုံးအရသက်သာပေမယ့် control လုပ်ရာမှာ၊အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးပြီး၊ tube တွေနဲ့ end covers တွေဟာလည်း sea water နဲ့ အမြဲထိတွေ့နေရတာမို့၊ corrosion ဖြစ်လွယ်ပါတယ်။
Fig. central cooling system
direct cooling sea water system နဲ့ central cooling system တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါ၊ direct cooling sea water system မှာ fresh water cooler တနည်းအားဖြင့် jack cooling water သို့မဟုတ် cylinder cooling water cooler တတ်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ central cooling system မှာတော့ fresh water cooler အစား၊ central cooler ကိုတတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Fig. central cooling with separate cylinder/ piston cooling system
central cooling with separate cylinder/ piston cooling system မှာတော့ central cooler ရဲ့အထွက် မှာ fresh-water cooler (cylinder piston cooling water cooler) ကိုတတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Image credit to : http://www.norco-oslo.no
Posted by ဒူဒူကြီး at 05:16